Neymar Jr oo ka hadlay kulankii xalay ay wada ciyaareen Luis Suarez isagoo dhinaca kale ku tilmaamay…. – Gool FM
(Brazil) 17 Nof 2018. Kabtanka xulka qaranka Brazil Neymar Jr ayaa ku tilmaamay saaxiibkiis hore kooxda Baecelona Luis Suarez calaamad, kadib kulankii ay xalay ku wada ciyaareen xulalka Brazil iyo Uruguay garooka kooxda Arsenal Emirates Stadium ee magaalada London.
Xulalka qaranka Brazil ayaa guul kaga gaaray dhigiisa Uruguay 1-0, wuxuuna goolka ahaa mid rigoore ah uu u dhaliyay Neymar Jr.
Kabtanka xulka qaranka Seleção ee Neymar Jr ayaa kulanka kadib wuxuu ka hadlay sida uu yahay xiriirka haatan kala dhexeeya saaxiibkiis hore kooxda Baecelona ee Luis Suarez.
“Luis Suarez waa calaamad, waxaana u rajeenayaa wanaag oo dhan, marka intaas lagu daro waxaan saaxiibo hore ku soo ahayn kooxda Barcelona, waana mid ka mid ah saaxiibada aan ku leeyahay kubada cagta, waana jeclahay isaga”.
“Waxaan isdhaafsanay maaliyadaha sanado badan, wali waxaan sii wadi doonaa saaxiibtinimada weyn ee inaga dhexeysa, waxaan nahay saaxiibo cajiib ah, mar walbana waxaan u rajeenayaa wanaag oo dhan”.
Wax ka ogoow qorsha lagu dayac tirayo Stadium Muqdisho+SAWIRRO